Le nkolelo Ukuba Umhlaba caba zibhalweni | Apg29
Uluvo lokuba ibandla bamandulo babekholelwa ukuba umhlaba usicaba amanga kusuka mvelo
Xa ufunda iBhayibhile, ungabona ngokucacileyo ukuba umhlaba ungqukuva. Ukuba umhlaba ayikho Beluya kuba uYesu wathabatha ephosakeleyo ngokupheleleyo ngeenxa xa uthi ukuba imini nobusuku on Earth, xa yoyigodusa bonke basindiswe ezulwini.
Iphephandaba Day lapapasha inqaku omkhulu emacaleni ezintandathu Jonathan Sverker malunga neengcamango iyelenqe . Phakathi kwezinye izinto, axoxa nam kweli nqaku.
Sverker nayo wasiphakamisa itulo ithiyori ukuba umhlaba tyaba kwaye ngeenxa zonke. Esi sifundo Ndiye ndakhulisa ngokuphindaphindiweyo Apg29.
Kukho amaKristu akholelwa ukuba umhlaba uthe tyaba, yaye baye bafumana zombini emails neeleta hemsänt nam apho sele uzama ukufumana ukuba ukukholelwa kumhlaba othe tyaba.
Kodwa ngaba ukholelwa kumhlaba othe tyaba, ezisekelwe eBhayibhileni kufuneka kkuba vesi yeBhayibhile, lubanike ukutolikwa eyahlukileyo bemkhanyela oko kuthethwa yiBhayibhile.
UYesu uthetha umhlaba nxazonke
Ukuba ngaloo mini kuba phezu kwendlu, zibe iimpahla zabo endlwini, makangehli aye phantsi kwaye chola kubo up. Ngokufanayo, umntu lowo nosentsimini makangabuyeli emva ekhaya. [...] ndithi kuni: I ubusuku iya kuba amadoda amabini sililini sinye. Omnye amkelwe, omnye ashiywe.
Xa uYesu yoyigodusa amakholwa ezulwini, kukho imini nobusuku on Earth. Kwaye angenza kuphela xa umhlaba ngeenxa zonke. Kwelinye icala umhlaba lo imini ngoxa kwelinye icala na ebusuku.
Ukuba uyakholwa ukuba umhlaba uthe tyaba, isinciphise kuThixo. Imihlaba Flat abakholelwa ukuba iinkwenkwezi kunye nendawo ekhoyo.
Bathi ke ngoko bakuphikayo ukuba uThixo unamandla kakhulu kangaka ukuba unako ukwenza isithuba ziwe. Kodwa iBhayibhile yam uThixo mkhulu kangangokuba uye wadala yonke le nto!
Inzululwazi echitha imfundiso
Abo bakholelwa ukuba umhlaba uthe tyaba ongakwamkeliyo iifoto umhlaba evela emajukujukwini nje ubungqina bokuba umhlaba ngeenxa zonke. Kodwa ngaphandle imifanekiso, kukho ubungqina kakhulu ukuba umhlaba kusala ukulenza ..
Kwelanga baye isithunzi setyhula
Ngexesha umnyama watyhida ilizwe layo isithunzi inyanga, kuba umhlaba phakathi ilanga nenyanga. Oku akunakwenzeka kunye nomhlaba flat.
Ukongeza, isithunzi koMhlaba enyangeni setyhula ngokucacileyo, nto leyo ebonisa ukuba Umhlaba nxazonke. Le fom kuphela njalo ngenye imini setyhula nokuba angle sphere.
zemihlaba Flat kuthetha ukuba Antarctica ayikho ngaphandle oko udonga eliphezulu ngumkhenkce. Kodwa ke izibakala zibonisa ukuba Antarctica i lizwekazi. Izazinzulu ziye ngokuphindaphindiweyo wadlula Antarctica.
Baninzi imifanekiso aye athathwa belizwekazi ukusuka moya. Ukongeza, amaphulo eziliqela ukuze azise kwangqina ukuba Antarctica akukho ludonga eliphezulu ngumkhenkce.
iibhloko Earth iinkwenkwezi
Basa efanayo azibonakali kuzo zonke iinxalenye zomhlaba. It is a isenzeko sokuba ziyacaca kuphela umhlaba ngeenxa zonke. esime Umhlaba kuthetha ukuba asikwazi ukubona ezinye iindawo zezulu.
Ukuba umhlaba idiski tyaba, iinkwenkwezi babebone naphi wezulu ingqalelo.
Ngoku sakukhangelayo kwezinye nezesayensi oko kubonisa ngokucacileyo ukuba umhlaba ungqukuva. Makhe siye eBhayibhileni ukuze abone ukuba oko likuthethayo ngalo mbandela.
Okokuqala sijonga amaxesha onyaka umdla, ukuveza engathethekiyo ukuba umhlaba ungqukuva.
Amaxesha onyaka ubonisa umhlaba nxazonke
1 Genesis 8:22 Nangona umhlaba uhlala ukuba ngokuhlwayela nokuvuna, ukubanda nobushushu, ihlobo nobusika , imini nobusuku akaphinda kodwa. "
IBhayibhile ithetha onyaka elingenasiphelo logama nje umhlaba uhlala. Amaxesha onyaka uveza umhlaba nxazonke.
Umhlaba ijikelezisa nje kuphela axis ngathi phezulu kwayo. Oku kugxile kwakhona malunga kwelanga isangqa esikhulu ebizwa komzila. ukujikeleza koMhlaba ujikeleza iLanga, kunye axis ukuthambeka komhlaba, kuthetha ukuba kufuneka amaxesha amane. Kusebusika ungqiyame Sweden kunye kumntla ikhweyitha kude ilanga.
Isizathu sokutshintsha onyaka na ukuthambeka komhlaba. Nangona umhlaba ihamba ilanga, oko ujikeleza kwakhona ngeenxa axis yaso, nto leyo ibheke malunga 23.5 degrees. Ngenxa ithambeka ujikajikana zifaka nezi ndawo Southern ukuba Walathe kwelanga revolution koMhlaba ujikeleza ilanga. Oku koko kwenzeka njengoko amaxesha.
Xa Umhlaba na inxalenye orbit xa kumntla ikhweyitha ejongene nelanga, sifumana kwelanga ngakumbi emini. Amandla extra elanga kumo umhlaba kunye nomoya - liya kuba intlakohlaza nehlobo.
emva kwesiqingatha sonyaka, uMhlaba uye kwelinye icala kwelanga; kwandule ke ikhweyitha esemazantsi ejongene ngqo ilanga, lo gama kumntla ikhweyitha nto emthunzini. Ngoko ke, lo zentlako-hlaza nezasehlotyeni, umzekelo, Australia naseMzantsi Merika, ngoxa ukuwa ebusika inxalenye yethu ehlabathini.
Indalo ibonisa umhlaba nxazonke
1 Genesis 1:14 Wathi uThixo, "Makhe ukukhanya esibhakabhakeni ukwahlula imini nobusuku!" Baya kuba imiqondiso ukuba bamakishe yamaxesha zezemihla neminyaka ; 15 baya izikhanyiso esibhakabhakeni samazulu, Okuya kuba phezu komhlaba. "Kwaye kwakunjalo njalo.
16 Wenza uThixo izikhanyiso ezikhulu zazibini, esona sikhulu isikhanyiso ukuba silawule imini kwaye esona sincinane isikhanyiso ukuba silawule ubusuku ; nazo iinkwenkwezi. 17 Wabamisa kuwo esibhakabhakeni ukuze zikhanyise ehlabathini, 18 zilawule imini nobusuku, zahlule ukukhanya kubumnyama. Waza uThixo wabona ukuba kulungile.
Oku sikubona kumbhalo ukuba uThixo ubeke imiqondiso ukuphawula yamaxesha nemihla neminyaka. Kwaye kukho ke ilanga nenyanga. Amaxesha ezahlukeneyo, ezifana njengoko amaxesha ityhila ngokucacileyo ukuba inyosi unalo umhlaba nxazonke! Kwaye ke eseBhayibhileni isifundisa oku!
Xa sithatha ngaphandle ezazithethwa amakholwa caba 'ngoko wenza ku nga Bibele. Bathi ilanga nenyanga bayalingana. Nenyanga kuba zinkulu ilanga akunjalo kuba ngowe-1 Eksodus 1:16 ithi:
Wenza uThixo izikhanyiso ezikhulu zazibini, esona sikhulu isikhanyiso ukuba silawule imini, baloo isikhanyiso ukuba silawule ubusuku; nazo iinkwenkwezi.
Apha kucacile ukuba ilanga likhulu kune inyanga! Ukuze siphendule lo ibonisa nyaniso: Funda iBhayibhile ukholelwe kule!
UIsaya uthetha umhlaba nxazonke
Ngaba kukho nto, akunjalo? Ngaba na kuthiwa uthe kuni kwasekuqaleni, nina akwaziwa ukuba ukususela ekusekweni ihlabathi? Yena uhleli komhlaba ngeenxa zonke , abo bahlala kuwo zifana mbovane. . Yena luvula izulu njengeqhiya ngelaphu, esukela up njengentente ukuhlala - Isaya 40: 21-22
Okubhaliweyo ngoThixo hayi imbali yenzululwazi, kodwa umhlaba kuthiwa ngeenxa (isigaba, sphere) njengoba ovele - ngokungathi yinto Kakade ukuba akudingeki wachaza.
Umhlaba ulenga space
Kwincwadi kaYobhi, siza ongafunda le Umhlaba ulenga isithuba - ngendlela efanayo njengoko ilanga kunye neNyanga.
Ulaneka izulu langasentla enyanyeni, yena Axhome ihlabathi phezu kokungeni . - Yobhi 26: 7
Qaphela ukuba oku akuthethi uMhlaba phezu kweentsika. Umhlaba ulenga nasiphi na isithuba!
Elwandle, unga ukubona noba kunina kuyinto egosogoso, kanye ithi kwincwadi kaYobhi, leyo yenye ezininzi iincwadi zeBhayibhile yamandulo:
An kunina enhle , yena wahlala kulo lonke amanzi, apho ukukhanya owayamene ubumnyama. - Yobhi 26:10
I Umhlaba nxazonke waqinisekisa ngamaxesha onke. Ngokomzekelo, kuye kwenzeke ukuba kubona kwelanga kwenyanga (isithunzi ukuba Earth luhamba the Moon), kodwa solförmörkrlse.
Xa uYesu babenamathele wayebethelelwe ukubulawa ukuphumeza umnqamlezo Calvary waba umnyama enkulu elanga. Ngawo umnqamlezo kaYesu ubonisa umhlaba nxazonke.
Marko 15:33 lilixa lesithandathu [12,00] wafika kulo lonke ilizwe lobumnyama eyaqhubeka kwada kwaba lilixa lesithoba [15,00].
Xa uYesu waxhonywa emnqamlezweni layigubungela lonke ilizwe lobumnyama kangangeeyure ezintathu. Oku waprofeta Amosi on. Funda esi siprofeto emangalisayo:
Amosi 8: 9-10 Kuya kuthi ngaloo mini, itsho iNkosi uYehova, endiya ilanga ukuya ezantsi emini enkulu kwaye ukubeka izwe kwi mnyama ilanga lihlabe umhlaba . 10 Ndiya kuyijika imithendeleko yenu ibe sisijwili, neengoma zenu zonke zibe sisimbonono. Ndiya kuzambathisa kunesinqe wonke ngerhonya kunye wenze yonke enkqayini intloko. Ndiya makube, kube njengesijwili esenzelwa umntwana okuphela nesiphelo kube njengomhla okrakra.
Nditsho mbali waseRoma kuFilego ikhankanya umnyama enkulu solar ngexesha wokubethelwa kaYesu. Origen waseAlexandria (182-254 AD) e Against uCelsus wabhala ukuba kuFilego, ngo "Kronike" wakhe, uYesu wathetha (Incwadi II, iSahluko XIV.):
"Ke kaloku kuFilego, kule ncwadi weshumi okanye elinesine, ndiyacinga, ngenxa yeziKronike bakhe, ukuba babhale kuphela, uYesu ulwazi iziganeko elizayo (kwakhona kweyela ukubhideka malunga ezinye izinto ezibhekisa kuPetros, ngokungathi kubhekisela kuYesu), kodwa wangqina ukuba iziphumo obabulingana iingqikelelo zakhe. "
Wabiza inkcazelo kuFilego of umnyama kunye neenyikima ngexesha lokulawula kukaTibheriyo Kesare (mhlawumbi ukuya 29 AD): ukuba "umnyama enkulu solar," yaye:
"Yaba busuku nelixa lesithandathu lemini [okt 12,00] ukuze iinkwenkwezi wabonakala esibhakabhakeni. Kwabakho nonyikimo lomhlaba olukhulu e nakwelaseBhitini, nezinto ezininzi ibhukuqiwe eNicaea. ".
Solar Eclipse kwenzeka xa inyanga udlula phakathi komhlaba kunye ilanga, yaye ezi kumgca othe ngqo, ilanga zingavezwa ngokupheleleyo okanye ngokuyinxenye emhlabeni ponisi.
It nangoku iincwadi ezithi ukuba abantu ephakathi babekholelwa ukuba umhlaba flat ebhaliweyo.
Kuye ngokulula wabonisa ukuba okungenani bafunda ngamaXesha Aphakathi wayesazi ukuba umhlaba nxazonke.
Lo profesa Imbali Swedish Dick Harrison uthi:
Inyaniso kukuba, akukho mntu mistrusted Columbus kwaye phantse akukho mntu aphakathi babecinga umhlaba wawuthe tyaba. Bekukho ukususela kumaxesha amandulo nenkolelo enzulu kakhulu kulo lonke Europe kwakhiwa, leyo ukuba umhlaba ungqukuva. Phantse bonke ababhali Western aseYurophu imixholo geographical jikelele in repertoire yakhe [ezinye zazo ahleliweyo] Bonke bangena kwisivumelwano ukuba ngeenxa umhlaba.
Uninzi mbali mihla bakholelwa ukuba nje intsomi ukuba ulwazi semilo koMhlaba yalityalwa ngamaXesha Aphakathi kwaye oku umzekelo factoid.
A factoid na iinkolelo eba njengento eyinyaniso, kodwa enyanisweni ayilunganga.
Wayeshumayela emhlabeni nxazonke
Intshumayelo kumaXesha Aphakathi eyayibanjelwe ngokunxamnye noko abaninzi bakholelwa ayikho Latin kodwa lwenkobe. Yaye iintshumayelo baphathwa scheme indalo, kuquka imilo ungqukuva komhlaba.
I-Norwegian Konungaspegeln ukusuka 1200s kuba incwadi basekuhlaleni ukuba ukhankanya imilo umhlaba kunye ezemfundo uchazela umfundi ukuba acinge yomhlaba njengoko i-apile ijinga ngokukhululekileyo. Ukuba ke ngoko ukuba ukukhanya emhlabeni apile, njengoko imini nobusuku, kwaye umehluko sezulu phakathi kwamazwe Nordic kunye namazwe ehlabathini-ikhweyitha.
Petrus de Dacia, ngokuqhelekileyo ekubhekiselwa umbhali wokuqala Sweden yakhe, kwaba indela Dominican evela Gotland. Kwiincwadi zakhe umhlaba ibhola imilo ezicacileyo.
Ukulala evela mvelo
Ngexesha 1800 phakathi kwexesha lehla impi zesayensi phakathi Darwinists nezazi ngale imfundiso yokuba izinto zazivelela. I intsomi yomhlaba flat waba lokuphikisa ibandla waza wasetyenziswa ukubonisa ukuba iCawa nalo engalunganga ngalo mba.
Ubuxoki yasasazeka ngokukhawuleza waza waqalisa ukuba waqonda njengenyaniso.
vesi abayiqondi Bible
Mateyu 4: 8 Wandula ke uMtyholi wamthabatha emnyuse entabeni ephakamileyo kunene waza wambonisa zonke izikumkani zehlabathi nozuko lwazo. 9 Wathi: "Zonke ezi zinto ndokunika, ukuba uthe wawa phantsi, waqubuda kum."
Ngokusengqiqweni, siqonde ukuba umtyholi ayikho ngokoqobo nako ukuthatha uYesu emnyuse entabeni ephakamileyo ukubona zonke izikumkani kuba ezintabeni eziphakamileyo ezinjalo. Kufuneka siqonde umbhalo ngokomoya. UMtyholi Weza ngezilingo engqondweni kaYesu.
Xa iBhayibhile ithi umhlaba uza kuba iikona, umzekelo, ngo-Yobhi 38:13, oko imifanekiso. Oku sikubona ngokucacileyo ukuba sifunda ivesi kwimeko kwaye yenza nje quote ekwanti. Inombolo UMthetho enye njalo ukufunda izinto ngokomxholo.
Job 38: 9-18Ngubani na okhuphe lo ulwandle ngeengcango Ekutyhobozeni kwalo, luphuma esizalweni; 9 xa wanika ngamafu ukuya yokugquma yaye mayibe ubumnyama baba isanda, 10 xa isigqibo ngoko Ndakumisa imivalo neengcango ngenxa yalo, 11 esithi: " apha uya kuza, kodwa akukho ngakumbi, oku kufuneka kube amaza akho adlokovayo mazisale '? 12 Ngaba ukusukela waqalisa imihla yakho, wayalela imini kusa ezilungiswe isifingo indawo 13 apho ukwenza komHlaba ezimbombeni zaso, ukuze abangendawo bavuthululwe kuwo? 14 Emva koko utshintshe ifomu umhlaba udongwe phantsi itywina, yaye ngakumbi asakhasayo njengoko costume omtsha. 15 Xa abangendawo ukukhanya kwabo, Nengalo liphakamele ukwahlukana. 16 Ngaba uze uhle kwizibonelelo olwandle waza wahamba emazantsi enzulu? 17 Ngaba amasango okufa ityhilwe kuwe, uye wabona nasethunzini lokufa zamazibuko? 18 Ngaba uyakwazi ukubona ngaphaya babeziindleko zehlabathi? Ndazise
Enye vesi kwakhona ngokuqhelekileyo wachaza ngempazamo ukuba umhlaba uthe tyaba kwaye ezimbombeni ezine ISityhilelo 7: 1
Rev 7: 1 Emva koko ndabona izithunywa ezine zimi ezimbombeni zone, zibambe imimoya yomine yomhlaba, ukuze kungabikho moya uya uvuthuza emhlabeni okanye elwandle okanye nawuphi na umthi.
Kodwa ke nje inkcazelo kwiimbombo zone zomhlaba. North, South, East ne West. Kutheni ukufunda nantoni ongekho kwisicatshulwa? Ithi nto, umzekelo, ukuba umhlaba uza kuba tyaba oku.
Ngaphezu koko, asimele silibale Rev 7: 1 ichaza umbono - umbono - nto leyo ithetha ukuba akukho ukuba ngokoqobo ibukeke kuba sele amanqaku kwaye ufuna ukucacisa - inyaniso kuyabonakala.
Kukangaphi na ke sithi "ilanga liphume" xa siyazi ukuba ilanga unako 'ukuya' hayi kuba akukho nemilenze! Nkqu SMHI ithetha "Sunrise kunye kwelanga" ngokucekisa abathile ufanele wazi ukuba umhlaba ejikeleza ilanga!
Icala IsiNgesi AnswersInGenesis ucacisa iindidi ngeendidi iSibhalo elidla abaqondi ukuba umhlaba uza kuba flat.
Kule meko ke kufuneka kwakhona kukhankanya umbono ukumkani uNebhukadenezare iphupha kaDaniyeli isahluko ezine:
Dan 4: 7-8 Le mbono ebendinalo esililini sam nantsi: Ndabona embonweni wam umthi usesazulwini sehlabathi; kwaye owawumkhulu kakhulu. 8 Umthi yaba likhulu, elo lomeleleyo, kwaye phezulu kangangokuba iye yafika emazulwini waza wabonakala ekupheleni emhlabeni.
Oku ngesiqhelo nayo ifakiwe ye, classes ukuba iBhayibhile ithetha umhlaba tyaba kuba umthi "wabonakala ekupheleni kwehlabathi". Kodwa ke kwakhona emehlweni - nayo iphupha - namaphupha ikhanyisa ayisoloko kukhangeleka ngokwenyani. Okwesibini, yinto imifanekiso nayo UDaniyeli itoliki, njengoko sibona kamva kwesi sahluko! Umthetho inombolo enye: Soloko funda yonke emxholweni!
Ngaba umhlaba phezu kweentsika?
Ngaphambi kokuba singene nzulu kulo esinomdla isihloko, kufuneka ukhankanye nantoni na malunga nokuba ihlabathi liya kuma phezu kweentsika, apho ubona emfanekisweni phezulu. Ingaba oku ngokwenene iBhayibhile?
Job 38: 4-7 Ubuphi na wena ukuseka kwam isiseko ihlabathi? Phendula, ukuba unayo loo ukuqonda. 5 Ngubani wagqiba imilinganiso yalo, ukuba uyazi? Ngubani na ololulele ulutya lokulinganisa? 6 Apho wenza undoqo iinqaba zabo? Ngubani wabeka ilitye lakhe, 7 ngoxa kwamakhwezi okusa, Beduma bonke oonyana bakaThixo bakhwaza luvuyo?
Kwakhona, ngalo mfanekiso. Ithetha "kwamakhwezi okusa," Ngubani na ubone inkwenkwezi ukucula? Kukho intetho ethi "ulutya lokulinganisa" kunye "lembombo". Ezi imifanekiso ezithetha ubukhulu kaThixo amandla okudala geqe. Ngoko: uYobhi ukuchaza umhlaba uya kuma umfanekiso iintsika phezulu eli nqaku ibonisa.
Yintoni iinkwenkwezi yeZulu?
Up. 6:13 njengeenkwenkwezi zezulu wawa emhlabeni, njengokuba umkhiwane uwisa amakhiwane awo aluhlaza xa ezingenakuzanyazanyiswa.
Siyazi ukuba iinkwenkwezi sezigidi. Ukuba iinkwenkwezi kuwa phezu komhlaba, umhlaba uza kutshatyalaliswa ngoko nangoko. Ngamanye amazwi, akangekhe iinkwenkwezi ukuba sicinga njengokuba iBhayibhile ichaza. Kuthini na ke ngoko?
Sibona eBhayibhileni ukuba xa uSathana ukhupha ezulwini, wathabatha isiqingatha sesithathu seenkwenkwezi zezulu kunye naye elishweni lakhe. Stars kule meko ke zizithunywa zezulu. USathana yesithathu ezithunywa zezulu kunye naye kwimeko yakhe.
Xa ixesha kukuba iinkwenkwezi zezulu wawa emhlabeni njengoko yaba izithunywa zezulu ukuba yawa phantsi emhlabeni.
Oku kusifundisa ukuba simele siqonde izibhalo ezithile ke kufuneka ukuvumela umbhalo achaze itekisi uyilese ngokomxholo. Kungenjalo sifumana imposiso nayo amakholwa caba oyenzileyo xa ziprintwe iivesi kunye neenkcukacha ngaphandle mxholweni.
IBhayibhile ithi umhlaba flat? | EternalAnswers
Xa umhlaba usicaba
imibhalo yeBhayibhile abathi umhlaba nxazonke